Baarlamaanka maamulka Galmudug oo xilkii ka qaaday Madaxweyne Cabdikariim Guuleed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka maamulka Galmudug oo xilkii ka qaaday Madaxweyne Cabdikariim Guuleed
January 10, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Galmudu Cabdikariim Xuseen Guuleed. [Sawirka: Archive]
Cadaado-(Puntland Mirror) Xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa maanta oo Talaado ah xilkii ka qaaday Madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed, iyaga oo ku eedeeyay wax-qabad la’aan.
Tiro 54 xildhibaan ah ayaa u codeeyay in xilka laga qaado Madaxweyne Guuleed, sida uu sheegay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka.
Gelinkii hore maanta oo Talaado ah, Madaxweyne Guuleed ayaa saxaafada joogta Muqdisho u sheegay in uusan aqbali doonin waxa kasoo baxa baarlamaanka.
Waxa uu xafiiska joogay muddo ka yar labo sanno.
March 25, 2017 Ganacsade daawooyinka iibiya oo loo doortay guddoomiyaha ururka PUNSAA
December 7, 2016 Ugu yaraan 54 qof oo ku dhimatay dhul-gariir ka dhacay Indonesia
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntand Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Isniin ah u safray dalka Itoobiya. Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay garoonka diyaaradaha kumeelgaarka ah ee Kanooko oo kuyaala Garoowe, Madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Markab sida 27,000 xoolo isugu jira riyo iyo ido ayaa kusoo xirtay dekada magaalada Boosaaso galabnimadii Isniinta, sida ay sheegeen ganacsatadu. Markabka ayaa bil kahor ka tagay magaalada Boosaaso isaga oo ku sii [...]